“ခရီးဝေးသွားဖို့ အချိန်မပေးနိုင်တဲ့သူတွေအတွက် ရန်ကုန်မြို့နဲ့ အနီးဆုံး အပန်းဖြေလည်ပတ်လို့ရနိုင်မယ့်.. ပဲခူး ရွှေပြည် Resort “
 မြန်မာ့နှစ်သစ် အတာသြင်္ကန်ပိတ်ရက်တွေကို မိသားစုနှင့်အတူ အေးချမ်းစွာ အနားယူ အပန်းဖြေနိုင်စေဖို့ ရန်ကုန်မြို့ပြနဲ့ အနီးဆုံးဖြစ်တဲ့ .. ပဲခူးမြို့က ရွှေပြည် Resort မှ နွေးထွေးစွာ ကြိုဆိုနေပါတယ်။
ရန်ကုန်မှ တစ်နာရီခန့် ကားမောင်းလျှင် ရောက်နိုင်တဲ့ ရွှေပြည် Resort ဟာဆိုရင် ရန်ကုန် - ပဲခူး Highway လမ်းမကြီးပေါ်တွင် တည်ရှိသည့်အပြင် စိမ်းလန်းစိုပြည်သော နာမည်ကြီး ပဲခူးရိုးမတောင်တန်းကြီး၏ တောင်ဘက်တွင် တည်ရှိပါသည်။ ကျယ်ဝန်းတဲ့ ရေကန်ရှုခင်း၊ လှပတဲ့ဥယျာဉ် ရှုခင်းများ နောက်ခံနဲ့ သဘာဝအတိုင်း ခမ်းခမ်းနားနား တည်ဆောက်ထားတဲ့ သစ်လုံးဘန်ဂလို အိမ်လေးတွေမှာ အေးချမ်းစွာ အပန်းဖြေ အနားယူလို့ရပါတယ်။
ရှုမငြီးဖွယ် သဘာ၀ အလှအပတွေနှင့် ပြီးပြည့်စုံတဲ့ ဒီနေရာလေးဟာ အပန်းဖြေ အနားယူလို့ ကောင်းတဲ့အပြင် အလှဓာတ်ပုံ၊ ဗီဒီယိုနှင့် ရုပ်ရှင်ရိုက်လို့ ကောင်းတဲ့နေရာတစ်ခုလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ လာရော် လည်ပတ်သူတွေအနေနဲ့ Resort တစ်ခုလုံးကို Buggy ကားစီးပြီး လည်ပတ်လို့ရသလို ရွှေပြည် Restaurant နှင့် Air Bus Café ပေါ်က အရသာရှိတဲ့ အစားအသောက်တွေကိုစားရင်း အပန်းဖြေလို့ ရနိုင်ပါသေးတယ်။ အပျော်တမ်း ဘဲလှေတွေ၊ Kayak လှေတွေ စီးလို့ရတဲ့အပြင် စက်ဘီးစီးရင်း ပျော်ရွှင်စရာ အမှတ်တရတွေကိုလည်း ဖန်တီးနိုင်ပါသေးတယ်။
ဒါ့အပြင် ဆင်လိမ္မာလေးတွေရဲ့ ကပြဖျော်ဖြေမှုလေးတွေ ကြည့်ရှု ... အပန်းဖြေရင်း ဆင် စီးလို့လည်း ရပါတယ်။ ကျန်းမာရေးအတွက် Yoga နှင့် လေ့ကျင့်ခန်းတွေ လုပ်မယ် … ပျော်စရာ Group Activities တွေ အများကြီး လုပ်လို့ရတာကြောင့် မိသားစုနဲ့ဖြစ်စေ၊ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ဖြစ်စေ လည်ပတ်လို့ကောင်းတဲ့ နေရာကောင်းတစ်ခုပါ။ ရွှေပြည်မှာ ပိုပြီးအပန်းဖြေစေမယ့် SPA လည်း ရှိတာကြောင့် လည်ပတ်လို့ မောလာပြီဆိုလျှင် SPA မှာ Thai traditional Body SPA နှင့် Foot Massage စတဲ့ ဝန်ဆောင်မှုတွေနဲ့ အပန်းဖြေလို့ရပါတယ်။
ရွှေပြည်ရဲ့ ထူးခြားချက်အနေနဲ့ ကမ္ဘာအကြီးဆုံး ပန်းပုရွာ ပန်းပုပြတိုက်ကြီးအဖြစ် ကြိုးစားပုံဖော်နေတဲ့ ရွှေပြည် ပန်းပုပြတိုက်ကြီးမှာ စိတ်ဝင်စားဖွယ် ပန်းပုရုပ်ပေါင်း ၂ သောင်းကျော်ကို လေ့လာနိုင်ဦးမှာပါ။
စိတ်ပင်ပန်းမှုတွေ ပြေပျောက်ပြီး ဗဟုသုတ ရရှိစေမယ့်အပြင် ပျော်ရွှင်စရာ ခရီးစဉ်လေးဖြစ်စေဖို့
ရွှေပြည် Resort ကို အရောက်သာ လှမ်းလာခဲ့ဖို့ ဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါရစေ ...။
Facebook : https://www.facebook.com/shwepyiresort/
Website : ww.kmahotels.com/shwepyi/
???? 09 457 400006, 099 77 99 7900 ~ 04, 09 44 55 66 036 (Hot Line)
???? အမှတ် ၉၉ (ဂ)၊ရန်ကုန်-ပဲခူး အဝေးပြေးလမ်းမကြီး၊ ၁၀ မိုင်ကုန်း၊ ပဲခူး။